Antonio Rudiger oo sharraxay xaqiiqda ah inuu diiday inuu ka tago kooxda Chelsea – Gool FM
(London) 14 Okt 2020. Daafaca reer Germany iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Antonio Rudiger ayaa sharraxay xaqiiqda ah inuu diiday inuu ka tago Blues inta lagu gudajiray suuqii xagaaga.
Antonio Rudiger ayaan kulamo badan u ciyaarin kooxdiisa Chelsea xilli ciyaareedkan, inkastoo uu bandhig fiican sameeyay xilli ciyaareedkii hore, waxaana lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxaha AC Milan, Tottenham iyo Paris Saint-Germain.
Warsidaha “The Athletic” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Antonio Rudiger, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Chelsea iima aysan sheegin inay muhim tahay inaan helo koox cusub, isla markaana aanan ku jirin qorshayaashooda bilaha soo socda”.
“Sidoo kale waxaan iska diiday hal ama laba dalab oo aniga igu saabsan, diyaar uma aheyn inaan ka tago wax walba sababa la xiriira in marar badan la i dayacay, waan ku raaxaystaa inaan ku noolaado London waana jeclahay inaan joogo Chelsea”.
”Dabcan, waxaan eegay laba dalab labadii todobaad ugu danbaysay ee suuqa xagaaga, waxaa jirtay suurtogalnimo ah in la sameeyo heshiis amaah ah, si aan u helo waqti dheeri ah oo aan ku ciyaari karo, sababo badan oo kala duwan iyo waqti la’aan waxba lama sameynin ugu dambeyntii”.
“Tani waa xaalada wakhtigan, waan aqbali doonaa, waxaana isku dayi doonaa in aan isku muujiyo tababar kasta, waxaan ku jirnaa tartamo badan oo kala duwan”.
Waxaa xusid mudan in 27 jirkaan reer Germany uu u dhaqaaqay kooxda reer London ee Chelsea xagaagii 2017, isagoo kaga soo biiray naadiga reer Talyaani ee Roma adduun dhan 29 million pounds.